Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » North Korea Air Koryo na-ekwupụta ịmaliteghachi ụgbọ elu China
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • News • Akụkọ North Korea na -agbasa • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
North Korea emechila ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla site na ala, oké osimiri ma ọ bụ ikuku na Jenụwarị 2020
North Korea na-egosi "ihe ịrịba ama na-aba ụba" nke ime ka ihe mgbochi ókèala ya na China belata
N'oge gara aga, Air Koryo wepụtara oge ụgbọ elu ya gaa obodo Vladivostok nke ọdụ ụgbọ mmiri Russia
North Korea Ikuku Koryo odi ka aga edobeghachi oru ugbo elu abuo n’etiti Pyongyang na Beijing n’izu a, webusaiti nke ugbo elu gosiputara taa. Ọ ka edochabeghị anya na mgbe ọrụ ahụ ga - amaliteghachi mgbe ihe karịrị otu afọ kwụsịtụrụ n'etiti COVID-19 oke mgbochi oke oke.
Oge ụgbọ elu etinyere na websaịtị ụgbọelu mba North Korea, ụgbọ elu JS251 ụgbọ elu ga-apụ na Pyongyang na 4:00 pm wee rute Beijing na 5:50 nke mgbede na Tọzdee. A na-akwado ụgbọ elu ọzọ ịhapụ Beijing na Pyongyang na Fraịdee.
N'ihe dị ka elekere 4:30 nke mgbede, agbanyeghị, ụgbọ elu ọpụpụghị na Pyongyang, site na ezigbo onye na-eso ụzọ ụgbọ elu. Specfọdụ kwuru na ụgbọ elu ahụ nwere ike ịnwale ebe nrụọrụ weebụ ya na nkwadebe ịmaliteghachi ụgbọ elu na China.
Na mbido taa, otu onye ọrụ mịnịstrị na-ahụ maka njikọta gwara ndị ntaakụkọ na Nọt Koria na-egosi "ihe ịrịba ama na-abawanye ụba" nke ime ka mmachi ókèala ya na China belata.
North Korea emechila ọdụ ụgbọ mmiri niile nke mbata site na ala, oké osimiri ma ọ bụ ikuku na Jenụwarị 2020 na mbọ iji gbochie coronavirus ịgbasa na mba ahụ.
Na mbụ, Air Koryo tọhapụrụ usoro ụgbọ elu ya gaa na ọdụ ụgbọ mmiri Russia nke Vladivostok, mana ọ rụghịkwa ụgbọ elu ebe ahụ.
North Korea ekwuputaghi ikpe ọ bụla nke nje COVID-19, mana ọ kpọrọ oku ka mba niile gbalịa igbochi nje ahụ ịpụ na ala ya site na njikwa oke oke na usoro mkpuchi iche.
Ụgbọ elu China